Maurice de Hond chọtara ihe efu na ọkara ihe mgbochi iwu (video): Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 22 Ka 2020	• 13 Comments
N'ime nkeji iri atọ na atọ na-esote, lee anya na Maurice de Hond, nwoke nọ n'azụ ntuli aka obodo buru ibu nke anyị nwere ike "ịtụkwasị obi". De Hond achọpụtala na ụfọdụ ọmụmụ na-egosi na otu iwu na ọkara nke ọkara bụ ihe nzuzu na coronavirus na-agbasa ngwa ngwa mgbe ikuku adịghị mma.
N'ezie Maurice kwenyesiri ike na ịdị adị nke nje ahụ yana site na weebụsaịtị ya smartexit.nu anyị na-ahụ oku iji dejupụta nkọwa gị gbasara ma oria ma ọ bụ na ọ nweghị oria yana ihe mgbaàmà ị nwere. N'ezie, nke ahụ abụrụlarị ụzọ mara mma maka ngwa ndị ga-enyocha anyị n'oge na-adịghị anya.
Ee, ebe a na saịtị anyị na-ekwukarị maka mmegide a na-achịkwa na nnabata nke nọmba 33 nke Freemasonry jiri gosipụta na ha na-achịkwa. Atụkwasịghị m obi Maurice de Hond, ya na ntuli aka ya na ntanetị ya na vidiyo 33 ya, maka otu mita.
Ihe anyị maara bụ na ọ dịla ochie dịka okporo ụzọ Rome, na ọ kacha mma ịhazi nkatọ gbasara steeti n’onwe gị. Ọ bụrụ na ị na-akpali ndị mmadụ n'otu oge ịmejupụta data ahụike ha n'oge nkatọ ahụ, ị ​​nweela ndị ahụ na weebụ gị. N'oge na-adịghị, ebudatara ngwa ndị ahụ na Maurice nwere ike nyochaa nke ọma karịa "mgbasa nke coronavirus".
N'agbanyeghị nkatọ ọ nọ, Maurice de Hond na-akpali gị isonye na nlekota ma na-akwadebe gị maka nnukwu ngwa data
Onye ọ bụla nwere ike ịchọpụta na cloglog ha na otu a na ọkara mita nke mmiri dị ala na anyị na-aghọgbu anyị n'ọtụtụ. Onye ọ bụla nwere mmetụta uche ya na enwere ihe na-akpata mita ahụ na ọkara. Na isiokwu a Egosiputara m (iji gosi nke ahụ) na achọrọ otu mita na ọkara iji nyere aka ọgụgụ na ederede arụmọrụ nke DNA / RNA gị. Onye ọ bụla ga - agbarịrị ebe iji anya maka nke a. Ogologo oge ahụ bara uru ma dịkwa mkpa na "ịntanetị nke ihe" nke mmadụ ga-eme 1 nke ihe.
Anyị kwesịrị isi na Krimson Maurice de Hond pụọ na "mkpọchi amamihe" na "ọpụpụ amamihe". Na ihe niile mara mma nke ukwuu na onweghị ihe ọ bụla a ga-ekwu, mana enweghị m ntụkwasị obi na De Hond na ọnụ ọgụgụ ya mana anaghị m atụkwasị obi na ọnụ ọgụgụ nke steeti ahụ. Nke ahụ ọ bụ ịtụ ụjọ? Ee, kpọọ ya enyo siri ike.
Banyere m, anyị ekwesịghị ịpụ gaa ọpụpụ nke amamihe, mana nye ntaramahụhụ obi ọjọọ nke gọọmentị ụgha nke ga-agbadata ozugbo ma nnọchi anya ndị nnọchi anya nke ndị mmadụ na-eweta. Ndi minista a hoputara site na ochichi onye kwuo uche ya na-ekwenye ntukwasi obi nye ndi mmadu karie okpueze.
Anyị ga-akwụsị ime mkpesa maka gọọmentị n'ihi na anyị na-enye ikike iwu ahụ. Maurice de Hond gosipụtara nkwanye ùgwù na ekele maka Mark Rutte ma burula ya ọtụtụ afọ dịka nwoke ahụ nyere ikike ire ọchịchị onye kwuo uche ya nke ọchịchị onye kwuo uche ya site na "ntuli aka ya". Nanị ụzọ ọ ga - esi wepụta ọnọdụ a bụ ịnagide ụlọ kanụ na-aghụghọ aghụghọ a ma ghara inye ha nzere ọzọ. Ọ bụghị ọpụpụ amamịghe, mana mgbanwe!
Ekwela ka ị banye ụgbụ nchekwa ọzọ; otu na - ejigide nchekwube kacha njọ maka mgbanwe, ebe a na - akwado gi ka towards chee echiche. Nwepu maka mgbanwe siri ike ma doo anya nke dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, iji gbochie iwu ịgba ọgwụ mgbochi mgbochi yana iwepu otu mita na ọkara nke enweghị uche. Gaa na www.fvvd.nl
MGBE 26-05-2020: o doro anya na e werewo vidiyo Café Weltschmertz na ajụjụ ọnụ a na Maurice de Hond na-anọghị n'ịntanetị site na YouTube.
Isi mmalite ntinye: wikipedia.org, smartexit.nu, fvvd.nl
Gọọmentị na-eme ntuli aka mmadụ 900 ma kpọọ ya onye nnọchi anya ịbanye ngwa corona (Mmelite)
Nkwado megide nsogbu gọọmentị Jordie Zwarts na-atụ ụjọ, mana ọ nweghị ihe ọ bụla
Mkpọchi Coronavirus: iwu mberede, iwu obodo na ikike dị mkpa, ihe ịkwesịrị ịma, ihe ị ga - eme (Iwu ọgbaghara ahụ enweghị usoro iwu)
Oge ntụrụndụ corona bụ ihe kacha njọ maka imi gị: nro na nnwere onwe dị nso
Tags: otu na ọkara, kọfị, coronavirus, de, Ụzọ ọpụpụ, agba, Aka, intelligente, mkpọchi, Maurice, mita, nnyocha, ọha mmadụ, smart, video, weltrschmertz
22 May 2020 na 11: 46
Ee e, ị nwere onye ọzọ, otu si klọb na ekwu ire ahịa mgbe niile. You nụ ka ha na-ekwu, dịka a ga - asị na ha nwere 'amamihe' niile dị n'aka ha. Ha nwere ike nọrọ na nzuzo ịgbachi nkịtị maka afọ ole na ole ma ọ bụ naanị pụọ kpamkpam wee buru 'Corona' gị. Nnọọ egwu na-anọgide na-ama jijiji.
Ndị mmadụ bịanye aka na akwụkwọ mkpesa Ugbu a! https://www.fvvd.nl
22 May 2020 na 12: 08
Ọ nwere ike, ma anyị agaghị agbacha ọnụọgụ ọnwụ iri atọ na atọ ma ọ bụrụ na anyị mere ihe ndị ahụ. 😷
ps: Na america a na-akpọ mmega ahụ C rimson C ontagion  ọ ga - abụrịrị aha Suske en Wiske.
22 May 2020 na 12: 26
Ee, ee, ị na - amalite ịchịkwa ihe niile na --ebelata nnwere onwe ikwu okwu. Na-egwu egwu.
Ọ dị mma, ọ bụghị ihe ijuanya mgbe ndị agadi nwere nnukwu mkpesa anụ ahụ na mgbe niile nri na-edozi ahụ, nri dị njikere, nwụrụ n'ụlọ ndị nọọsụ ahụ. Ndị agadi na-anọrị ma na-anọ ibe ha, ma si otú ahụ na-efe efe na ibe ha. Gọọmentị adaala, agaraghị edobere ndị agadi ọnụ. Nke a bụ ụta na ọbụna ntaramahụhụ dịka m siri chee. A ka nwere ndị isi na ndị ọka ikpe siri ike ga-ejide onye isi ha na / ma ọ bụ njikwa nke ụlọ ezumike nká / RIVM wdg. Ọ bụghị n'ezie. Ọ dabara nke ọma na anyị bi na 'obodo nweere onwe ya' obodo 'iwu obodo'.
22 May 2020 na 14: 31
ọ dị mfe ikwu Sunny ma ọ bụrụ na anyị na-agbakọ ngụkọta nke ihe niile AOW na ụgwọ ezumike nka, ụkọ ga-ebilite ma anyị enweghị ike iwepụta mmefu maka ọdịnihu. E kwuwerị, gọọmenti na-ahụ maka ọdịnihu ma na-agbakwunye, ogige ịta ahụhụ bụ ihe achọrọ naanị enweghị mmerụ ahụ na-enweghị ịrị elu ahụ.
Lee ihe ọzọ 👃
23 May 2020 na 11: 06
Achọpụtawokwa ihe ngwọta maka nsogbu ezumike nká ndị ahụ:
"Usoro ohuru ugbu a na tebụl kwesịrị ịkwụsị mkparịta ụka banyere ọnọdụ ọjọọ nke ego ezumike nká, n'ihi nke ha enweghị ike iru ndị otu ha kwere na mbụ. Ọ gakwaghị adị mkpa iji mkparịta ụka mgbe niile 'ọnụego ọmụrụ nwa' ma ọ bụ iji belata ụgwọ ezumike nka ma ọ bụ.
N'aka ozo: enweghi nkwa na ego ezumike nka gi agbanyeghi na ego ahu choputara ya onwe ha, ekwesighi ka ha zaa ajụjụ. E kwuwerị, ọ bụ n'ihi mgbanwe na mgbanwe ngwaahịa.
22 May 2020 na 12: 10
22 May 2020 na 12: 18
Kat, Vogel, ị wee were ya, were ihe dị iche iche were were isi ha. Nwere imi maka ya….
22 May 2020 na 20: 12
Mean na-eche, imi nke (Gerrit) Zalm onye gosipụtara gị otu ị ga-esi debe ụlọ akụ wee tinye ndị ahụ the
23 May 2020 na 00: 15
Nke a bụ eziokwu, mana a ga m ekwenye na ha na - egwu ma flanks abụọ nke ọma na egwuregwu Hegelian. Oge na oge ọzọ, a na-egwuri egwu onye bi na Madurodam, kpụchaa isi ya ma zigara ya ahịhịa ma ọ bụ ọnya ọjọọ?
Ọ bụghị ụlọ ihe nkiri mara mma ma ọ bụ n'efu ... ooh, ihe ndekọ ahụ (ndozi) anaghị eso ma
23 May 2020 na 11: 38
Anaghị m enye ha otuto. Ha anaghị eji nke ahụ eme ya
ndị na - esoghị na klọb ha nke nwere ike ịbụ / bụrụ onye ga - asọmpi ha. Ehee, ha ebuola amụma ọrịa ọrịa ọhụrụ, ikekwe ịtụ bụ okwu ka mma. Otu ha si clairvoyant na pụrụ iche. Debe ndị ohu ahụ ka ejidere ha na mgbagwoju anya, ụkpụrụ ha. Olee mgbe ha na-apụ? Yesterdaynyaahụ ka nma karịa taa.
Debanye arịrịọ ugbu a! Adịghị efu gị ihe ọ bụla.
24 May 2020 na 10: 39
Ihe anyị anaghị ahụ
Oke ụjọ na Afrịka
Ọtụtụ puku ndị ọrịa ịba na-arịa nwụrụ anwụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Mana ugbua n'ọnọdụ ole na ole, a haziela ụlọ mkpọrọ eji achọ ... hụ n'okpuru
Ha na-adupu ndi mmadu n'okporo uzo wee kpofuo ha n'ogige
Sephus dere, sị:
24 May 2020 na 15: 15
Ose a dị n'okpuru ga - ewere nkeji iri na atọ. Udua? Echere m na e mebere ya nke ọma
Ma ọ bụ dịka mmadụ na-ekwu na nkwupụta: Eziokwu dị ebe a na nkeji iri na atọ karịa ka ị na-enweta na afọ iri na abụọ nke ụlọ akwụkwọ gọọmentị
24 May 2020 na 15: 35
Nkịta ahụ na ọnụ ọgụgụ ya ọ na - enweta okpu agha ya mgbe a mụrụ ya. Enweghị nnyocha, naanị ihe ọ chere banyere ya na ihe ọ ga-eme.
" Mmadu ole ndi Dutch ka nwere ike ikwu ugwo ha n'oge nsogbu Corona?
iPhone na-ezochi ngwa covid-19 kachasị ọhụrụ nwelite i-OS 13.5 »
Nleta ha: 2.508.635
Iyi egwu bọmbụ op Corona Nsogbu Covid-19 bụ ihe echetara afọ 2003 MS Blaster virus nke ana - akpọ Bill Gates
2 igwefoto op Ike nke mgbanwe na-amalite site na mkpo nke egwu, mmemme na echiche ụgha ma tụgharịa bụrụ ezigbo mgbanwe
bounz op iPhone na-ezochi ngwa covid-19 kachasị ọhụrụ nwelite i-OS 13.5